Ny sarimihetsika mampihoron-koditra 30 tsara indrindra mandeha amin'izao fotoana izao - iHorror
Home Vaovao Mahafaly Fialam-boly The 30 Sarimihetsika mampihoron-koditra tsara indrindra mikoriana izao
by Asher Luberto Janoary 12, 2022
by Asher Luberto Janoary 12, 2022 19,810 hevitra
Ny serivisy streaming dia feno sarimihetsika mihetsika sy hatsikana Adam Sandler, saingy saika feno flicks mampihoron-koditra. Angamba ny isan'ny anaram-boninahitra lehibe; ny isan'ny mpankafy horohoro angamba? Na izany na tsy izany, saika tsy azo atao ny misafidy amin'ireo safidy an'arivony.
Fa izay no nahatonga anay eto. Rehefa niaritra ny ala maizina amin'ny serivisy streaming valo izahay-Netflix, Hulu, HBO Max, sns…- dia nivoaka niaraka tamin'ny kitapo misy anaram-boninahitra tena tsara, fotoana malaza ary olon-dratsy mahazatra. Midira ary mitandrema: tsy natao ho an'ny reraka ireo.
Ny maty ratsy (HBO Max):
Indraindray, te-hijery lehilahy iray mandray andiana biby goavam-be ianao. Ny Evil Dead dia mahafantatra izany. Nolavin'izy ireo ny teti-dratsin'ny biby goavam-be miaraka amin'ny rà, ny tahotra mitsambikina, ary ny fanolanana hazo noho ny sarimihetsika hafa rehetra hatramin'izao. Mety ho afaka nanao izany izy ireo raha tsy nisy ny fanolanana hazo, fa ny fakan-tsary DIY avy amin'i Sam Raimi dia mijanona ho iray amin'ireo zava-bita manaitra indrindra amin'ny sarimihetsika amin'ny sinema maoderina.
28 andro taty aoriana (HBO Max):
Raha tsy te hijery sarimihetsika momba ny pesta ianao dia mahazo izany. Raha lazaina izany, 28 Days Later dia sarimihetsika masiaka sy mampatahotra feno tahotra sy fotoana tsy hay hadinoina. Tena tsara i Robert Kirkman nilaza izany ho fitaomam-panahy ho an'ny The Walking Dead.
Famongorana (Paramount +):
Ny sarimihetsika mahatsiravina indrindra tamin'ny taona 2018 dia ny Annihilation. Na dia hita ho sci-fi kokoa noho ny horohoro aza izy io, dia mbola nisy tahotra vitsivitsy ihany. Ilay dia aingam-panahy ho an'i Tarkovksy ho any amin'ny faritra–miboiboika misy fluorescent izay ahitan'ny biby ny voninkazo sy ny miaramila reraka–dia saina tsy hohadinoinao vetivety.
Trano (HBO Max):
Raha miresaka momba ny saina, House no zavatra akaiky indrindra amin'ny asidra eny an-tsena. Te hahita piano ratsy, saka majika, ary akondro miresaka tsy misy psychedelics? Boy, manana ny sarimihetsika ho anao ve izahay. Ny endri-javatra voalohany an'i Nobuhiko Obayashi dia toy ny fifangaroan'ny Scooby-Do sy The Magical Mystery Tour, Suspiria ary Salvador Dali. Tsy maintsy mahita izany ianao vao mino izany.
Ny peratra (Hulu):
Ny Ring dia fitsangatsanganana saina ihany koa fa amin'ny fomba hafa. Sarimihetsika japoney miaraka amin'ny foto-kevitra mangatsiatsiaka sy adala ny fiafarany. Ny fisehoan-javatra misy vehivavy mandady avy ao anaty lavadrano ary miditra amin'ny fahitalavitra dia toy ny zava-drehetra ao amin'ny House na Annihilation. Mety ho bebe kokoa…
Black Narcissus no endri-javatra fahadimy avy amin'ny The Archers. Tsy ny tsara indrindra ho azy ireo izany, fa avy eo dia nanao sarimihetsika tsara indrindra tamin'ny fotoana rehetra izy ireo. Ahoana no ahafahan'ny zavatra ambony indrindra amin'ny The Red Shoes na A Canterbury Tale? Raha lazaina izany dia namorona ny sarimihetsika Evil Nun miaraka amin'ity klasika 1947 ity izy ireo, sombin-tsarimihetsika Technicolor izay hanentana ny Benedetta sy The Nun.
Ny tranony (Netflix):
Ny ezaka mampihoron-koditra farany nataon'i Netflix dia miditra amin'ny tontolon'ny supernatural. Tafiditra ao anatin'izany ny trano mihantona sy mpivady voafandrika, miaraka amin'ny lesona momba ny hoe mpifindra monina any Angletera. Ny trano mihantona dia mampatahotra, fa ny fifindrana any amin'ny toerana tsy misy olona toa anao dia mety hatahotra kokoa.
Fanafihan'ny mpanendaka vatana (Tubi):
Tsia, tsy ny dika Donald Sutherland. Mbola zaza i Sutherland tamin'io fotoana io. Ny Invasion of the Body Snatchers tany am-boalohany dia Amerikana malaza avy amin'i Don Siegal, mpilalao sarimihetsika tsara kokoa noho i Phillip Kaufman. Ny dikan-tenin'ilay tantara vahiny misaron-tava ho olombelona dia fanoharana ho an'ny kominisma sy ny faharatsiana miafina eo imason'ny olona, ​​ka vao mainka mampihorohoro rehefa manomboka miseho eny amin'ny toerana tsy misy dikany ny “pod people”.
Ny mamirapiratra (HBO Max):
Tsy maintsy naka an'i Kubrick teto izahay. The Shining no hany "sarimihetsika mampihoron-koditra", saingy misy singa mampihoron-koditra ny sarimihetsika rehetra: andian-jiolahy mpanolana (A Clockwork Orange), lehilahy mirodana (Barry Lyndon), karazana manjavona (2001: A Space Odyssey) . Kubrick dia tsy misy dikany amin'ny fampihorohoroana, izay tsy mbola hita miharihary kokoa noho ny ao amin'ireo lalantsara misy kaody loko ao amin'ny The Shining. Jack Nicholson dia milalao raim-pianakaviana miaraka amin'ny famaky. Rehefa afaka iray volana tao amin'ny hotely Overlook, dia nanomboka very saina izy ary nanenjika ny fianakaviany toy ny totozy. Tonga ny Redrum.
Alligators goavambe io! Inona no mety hahafinaritra kokoa noho izany? Hiandry aho…
Maso tsy misy tarehy (Criterion Channel):
Mety mbola tsy naheno an'io ianao, fa ny Eyes Without a Face dia iray amin'ireo sarimihetsika manan-danja indrindra natao hatramin'izay. Ilay sarimihetsika dia nanentana ny The Skin I Live In, ary koa ireo tale toa an'i Guillermo del Toro. Izy io dia manaraka mpandidy plastika iray izay namono ny mpianatra eny amin'ny oniversite mba hahafahany manala ny tarehin'izy ireo sy hamatotra azy amin'ny zanany vavy, izay simba ny hodiny tamin'ny lozam-piarakodia. Ny sary dia manjavozavo, ny tononkalo naoty, ary ny fiafarany dia manome dikany vaovao ho an'ny "mamonjy tarehy."
Varavarankely aoriana (Criterion Channel):
Tantara efa niverimberina in-tapitrisa izy io. Misy mijery ny varavarankelin'ny mpifanolobodirindrina aminy. Avy eo, nisy vonoan'olona, ​​ary niantso namana izy ireo mba hanadihady. Disturbia sy The Woman in the Window dia mifototra amin'ny fototra iray ihany. Ny hany zava-dehibe anefa dia ny dikan-tenin'i Hitchcock izay fantatry ny lehilahy iray fa nanjavona ny vehivavy iray.
Ny Halloween voalohany dia ambony indrindra ary tena nanova ny lalao. Avy eo, nahazo tohiny roa izahay izay…tsara. Angamba tsy mampatahotra toy izany ny ratsy rehefa fantatrao fa ho tafavoaka velona ilay mahery fo, ary ho tafavoaka velona, ​​​​ary ho tafavoaka velona, ​​​​ary ho tafavoaka velona. Manomboka mieritreritra aho fa i Lauri Strode no tsy mety maty fa tsy Michael Meyers. Na izany na tsy izany, ny tany am-boalohany an'i John Carpenter dia manana tsatòka sy fihenjanana tena izy. Ny fakan-tsary mitsambikina, ny isa harpsichord, ny tifitra fanokafana, ny tovovavy farany… na ny tohiny 11 aza dia tsy afaka manaisotra ny zava-baovaon'ny magnum opus an'ny Carpenter.
Manaraka izany (Netflix):
Sarimihetsika momba ny STD ve izy io, sa dokam-barotra momba ny fimailo? Tsy afaka mieritreritra sarimihetsika iray hafa momba ny maha-zava-dehibe ny fitafy fiarovana aho, izay midika fa ny lahatsoratr'i David Robert Mitchell dia ao anatin'ny kilasy manokana. Izy io dia manaraka vehivavy iray izay nanenjika demonia izay nampitaina taminy tamin'ny alalan'ny firaisana ara-nofo. Mbola hampita izany ve izy? Sa hihazakazaka foana izy? Tsy mazava mihitsy ny valiny.
Guillermo del Toro no lohalaharana amin'ny Dark Fantasy, ary niditra tao amin'ny mainstream niaraka tamin'ny Pan's Labyrinth. Anisan’ny fahaizany ny mampiaraka ny famoronana sy ny zava-misy. Toa tsy mitombina ny tantaran'ny tovovavy iray any amin'ny tontolo hafa, saingy mifototra amin'ny horohoron'ny Ady An-trano Espaniola, ny fanararaotana ankizy ary ny tsy firaharahiana. Na dia ao amin'ny sarimihetsika misy biby goavam-be antsoina hoe "Pale Man", ny tena biby goavam-be dia olombelona.
Ilay Lehilahy tsy hita maso (HBO Max):
Mihevitra ianao fa manana olana amin'ny sipa… Manana sipa tsy hita maso i Cecilia ary te hamandrika azy ao anaty tranobe. Niezaka nihazakazaka izy, saingy izy ihany no afaka niafina.
Ny Omen (Hulu):
Tsy ny sarimihetsika rehetra miaraka amin'ny ankizy ratsy fanahy dia miasa, fa ity iray ity dia miasa. Damien no karazana zaza tsy avelanao na oviana na oviana eo akaikin'ny zanakao, na ny tenanao. Misy antony mahatonga azy hanana mpitaiza vaovao isaky ny misy azy
volana, ary tsy noho ny karama mahantra. Ampy ny milaza fa tsy hita ny olona, ​​atao ny fandevenana ary miarahaba ireo mpitsidika eo am-baravarana toy ny tsihy fandraisana ny fahafatesana.
Fantatray fa talen'ny Steven Spielberg, saingy lasa mpamokatra ihany koa izy. Namokatra sarimihetsika tsara indrindra tamin'ny taona 1980 izy, ary ny fanontana azy dia manerana an'ity tantara matoatoa ity. Rehefa manomboka miresaka amin'ny fahitalavitra ny ankizivavy iray, dia misy zavatra hafahafa mitranga. Vetivety dia nalaina an-keriny tamin'ny herin'ny ratsy fanahy izy. Alohan'ny ahafahanao miteny hoe "telefaonina an-trano", dia miezaka ny mifandray amin'ny ray aman-dreniny avy any amin'ny tontolo hafa izy.
Tsy tokony hafangaro amin'ny Suspiria an'i Luca Guadagnino, ity Suspiria ity dia momba ny zatovo iray niditra tao amin'ny akademia fandihizana tantanin'ny mpamosavy. Amin'ny fotoana iray dia tsy maintsy hahita ny fanekeny izy ary hanakana azy ireo tsy hamono mpandihy bebe kokoa. Mirary soa… Ny akademia dia labiera tsy manam-paharoa amin'ny maritrano Gothic, varavarana voafandrika ary loharanon-dra mena. Ny isa Goblin dia mamadika ny tohatra rehetra ho tohatra mankany amin'ny helo.
Sarimihetsika mampihoron-koditra io. Hatsikana io. Tantaram-bahoaka io. Travelog izy io. Ny Wicker Man dia ireo zavatra rehetra ireo sy ny maro hafa. Tonga teny amin’ny nosy iray ny polisy iray hanao fanadihadiana momba ny fanjavonan’ilay zazavavy kely 12 taona, izay lazain’ny mponina fa tsy fantany akory. Mipoitra ny zava-drehetra rehefa manomboka mihamitombo hatrany ny fombafomban'izy ireo (pole dancing?), ka mitarika ho amin'ny fiafarana tsy ho hitanao fa ho avy, ary tsy hohadinoina vetivety.
Sarimihetsika mampihoron-koditra ve izany? Mazava ho azy izany! Tsy azoko hoe nahoana no mora be ny mpankafy karazan-dahatsoratra nandroaka an'io efitrano mainty sy fotsy io rehefa nampihenjana kokoa tao anaty frame tokana noho ny an'ny ankamaroan'ny sarimihetsika ao anatin'ny fotoana iray manontolo.
Alin'ny maty velona (Criterion Channel):
Ny Night of the Living Dead dia mety tsy namorona ny sarimihetsika zombie, na ny hetsika DIY, toy ny eritreretin'ny olona maro. Saingy nesoriny ny horohoro tamin'ny fanjakan'ny lapa sy ny aloka ary ho amin'ny fahazavan'ny andro maoderina. Nilaza ny talen'ny George Romero fa ny ankamaroan'ny zavatra nampiavaka azy voalohany indrindra—ny fakan-tsary tànana, ny hazavana voajanahary—dia vokatra avy amin'ny famokarana sarimihetsika ambany tetibola fotsiny. Eny, marina. Ny manam-pahaizana ihany no afaka nanala ny zavatra nataon'i Romero teto.
M. Night Shyamalan dia tsy maintsy nijery Les Diaboliques in-20 farafahakeliny talohan'ny nanaovany ny The Sixth Sense. Manaraka lalana mitovitovy amin'izany koa ilay sarimihetsika: rehefa avy nandrendrika ny vadiny tao anaty koveta fandroana i Nicole, dia nariany tao anaty dobo ny vatany. Avy eo izy dia manomboka mahita ny vadiny manodidina ny tanàna. Velona ve izy? Sa mahita olona maty izy? Hmmm, manontany tena aho?
Carrie izao dia mandeha amin'ny Shudder, noho izany dia tsy maintsy nampidirinay izany. Ity no andraikitr'i Sissy Spacek voalohany, ary tsy ho tsara kokoa izy. Tsy isan'andro no ahitanao olona manan-talenta tahaka izao amin'ny sary voarindra tsara.
Ari Aster indray mandeha dia nanoritsoritra an'i Midsommar ho The Wizard of Oz amin'ny holatra, izay misy dikany. Ny lalana biriky mavo dia iray amin'ireo zava-mahadomelina any Midsommar. Betsaka ny sary mivadika, loko trippy, ary saina mikorontana eny an-dalana mankany amin'ity fetibe Soeda ity. Tsy any Kansas intsony izahay, azo antoka izany.
Hereditary koa dia tarihin'i Ari Aster. Ary toa an'i Midsommar, mifantoka amin'ny vehivavy iray miezaka mitazona ny fifandraisany izy io. Toni Collette dia milalao an'i Annie, mpanakanto namoy ny reniny ary matahotra ny ho faty koa. Manao sarin'ny tranony izy, izay mihoatra noho ny madinika; faminaniana ny amin'izay ho avy ireny. Raha mbola tsy nahita an'ity lalao knockout ity ianao, inona no andrasanao?
Tiako daholo ny momba ny Eraserhead. Mahafinaritra ny mpilalao, mampatahotra ny atmosfera, mamirapiratra ny foto-kevitra. Ny tantara dia mifototra amin'ny fahaterahan'ny zanakavavin'i David Lynch, na dia toa akaiky kokoa amin'ny tavoahangy rano aza ilay zazakely noho ny olombelona. Tsy ny olon-drehetra no ho eo amin'ny halavan'ny onjam-peo, fa azo antoka aho.
Misy sarimihetsika vampira maro kokoa noho ny Starbucks Coffees, saingy tsy mitovy amin'ny iray amin'izy ireo i Vampyr. Nofinofy kokoa noho ny sarimihetsika, toe-po kokoa noho ny famonoana olona. Tsy vitan'ny Blade ny zava-drehetra: mangina, misaintsaina ary mampangatsiatsiaka.
Jaws no zavatra tsara indrindra nataon'i Spielberg, fijanonana feno. Na dia tianay aza ny ET Indiana Jones sy Jurassic Park, dia tsy misy mahasosotra ny fientanam-po mandany faran'ny herinandro ao Amity miaraka amin'i Robert Shaw, Roy Schnieder, Richard Dreyfuss, ary antsantsa goavam-be.
Ho an'ity farany ity, te-hanome anao zavatra azon'ny rehetra ankafizinay izahay. Ny Conjuring dia karazana sarimihetsika manintona ireo mpankafy horohoro sy mpankafy Marvel, mpitady fientanam-po ary saka mampatahotra. Na ahoana na ahoana, ity fiverenana ity dia tian'ny demografika rehetra. Na ny zatovovavy aza dia mihevitra fa ny Conjuring dia tena mahafinaritra.